Haddii aad tahay qaxooti, labadaan arimoood ayaa kaa hor-taagan in aad shaqo ka hesho Sweden | Somaliska
Baaritaan lagu sameeyay dhibaatooyinka ka hor-taagan qaxootiga Sweden ku nool in ay soo galaan suuqa shaqada ayaa la soo bandhigay. Baaritaankaan oo ay ka qeyb qaateen madaxda shirkadaha adeega bixiya sida nadaafada, caafimaadka, gaadiidka iwm ayay muujiyeen in ay jeclaan lahaayeen in ay shaqo siiyaan soo galootiga balse ay jiraan labo arimood oo ka hor-istaagan midaasi.
Arinta 1-aad ayay ku tilmaameen luuqada, taasoo ay u arkaan arinta ugu muhiimsan. Maadaama macaamiisha ay la kulmayaan dadka shaqaalaha ah ay Swedish ku hadlayaan ayay madaxda shirkaduhu sheegeen in luuqadu ay tahay arinta ka hortaagan soo galootiga in ay shaqo helaan.
Arinta labaad ayay ku tilmaameen in ay tahay in shirkado badan aysan aqoon wadada loo marayo in la shaqaalaysiiyo soo galootiga, qaasatan dhinaca sharciga, qiimeynta shahaadooyinka iyo xitaa in aysan aqoon halka laga heli karo soo galooti shaqada ka soo bixi kara.
Waxay soo jeediyeen in ay fiicantahay in qofka wadanka qaxootinimo isaga dhiiba in ay haboontahay in Migrationsverket ay baaritaan ku sameeyaan xirfadiisa iyo in kor loo qaado tayada koorsada luuqada.
caqabado intaas ka badan ayaa jira oo ey ka mid tahay wadanka oo shaqadiisu yar tahay iyo in aan la dooneynin in soo galootiga la shaqaaleysiiyo maxaa yeelay magaca markey u arkaan in uu yahay soo galooti hoos ayeey iska dhigaan